Kaafi News » Dowladda Federaalka Somaliya Oo Sharci Daro Ku Tilmaantay Go’aankii Mucaaradka.
Dowladda Federaalka Somaliya Oo Sharci Daro Ku Tilmaantay Go’aankii Mucaaradka.
Posted on February 9, 2021 in TOP NEWS, WARAR by admin.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadallo ka soo yeeray xubnaha mucaraadka oo sheegay in aysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u aqoonsaneyn madaxwaynaha Soomaaliya.
Musharaxiinta mucaaradka ah iyo qaar kamid ah dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa sheegay in mar haddii uu dhamaaday muddo xileedkii xukuumadda federaalka ah aanay aqoonsaneyn sharciyadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu, ayaa sharci darro ku tilmaamay hadallada ka soo yeeray xubnaha mucaaradka.
Macallimu ayaa intaa ku daray in uu jiro qaraar iyo xeer ay horrey u soo saareen golaha shacabka, kaasi oo dhigaya in hay’adaha dastuuriga ay xilka sii haynayaan illaa kuwa kale laga soo doorto.
“Marka hore soo jeedinta xubnaha mucaaradka ma aha mid sharci ku qotonta, sababta oo ah waxaa la og yahay in qaraar baarlamaan uu jiro oo horrey baarlamaanka hadda jooga ee 10-aad ay u ansixiyeen labadiisa aqal, taasi oo ah in baarlamaanka hadda jooga waxa bedalaya oo keli ah baarlamaan la soo doortay , hay’adaha kale ee dastuuriga ee madaxda ay ka mid tahay waa la mid,” ayuu yiri afhayeenka xukuumadda.
Macallimu ayaa farta ku fiiqay in illaa laga helayo madaxwayne iyo baarlamaan la soo doortay madaxda joogta ay xilka sii hayn doonaan.
“Inta madaxwayne laga dooranayo ama inta baarlamaan cusub laga dooranayo, waxaa shaqeynaya baarlamaanka hadda jira,” ayuu intaa ku daray Macallimu.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macallimu, ayaa dhanka kale sheegay in dowladda ay diyaar u tahay wadahadallo lagu xalinayo ismari-waaga siyaasadeed ee taagan.
“Wixii kale ee wadahadal ah dowladda diyaar ayay u tahay inay wadahadal la gasho cid waliba, tanaasulaad badan oo is xig-xiga ayay madaxdu sameysay, Soomaalida waxay dhahdaa xujo ma falantee xaajo ayaa falanta, marka meeshaas xaajo ma oolin laakiin had iyo jeer dowladdu diyaar ayay u tahay,” ayuu yiri Macallimu.
Macallimu ayaa dhanka kale ka digay in shacabka qalqal iyo cabsi lagu abuuro.
“Waxaan rajeynaynaa in wax waliba dhammaan doonaan, laakiin cabsida iyo qalqalka shacabka lagu abuurayo ma aha mid meesha taalla,” ayuu yiri.
Waxaa jira dedaallo ay beesha caalamka waddo kuwaasi oo lagu doonayo in wadaxaajoodyada doorashada dib loo furo.
Muddo xileedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhammaaday isla markaana ma jiro heshiis siyaasadeed oo illaa iyo iminka laga gaaray oo arrimaha doorashada.
Arrintan ayaa waxaa walaac ka muujiyay wadamada taageera Soomaaliya iyo waliba shacabka Soomaliyeed.